निषेधाज्ञाका बीच नेपाली सेनाको यस्तो कडा निर्देशन, सबै तयारी अवस्थामा रहनु ! - Nepali in Australia
May 6, 2021 autherLeaveaComment on निषेधाज्ञाका बीच नेपाली सेनाको यस्तो कडा निर्देशन, सबै तयारी अवस्थामा रहनु !
बीच नेपाली सेनाको यस्तो कडा निर्देशन, सबै तयारी अवस्थामा रहनु !
..वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरै युवाहरुको घर उजाडीएको उदाहरण देखिएका छन् । युवकहरु खाडी मुलुकमा पसिना बगाएर काम गरिरहेका हुन्छन् । तर सन्तान लिएर गाउँमै बसेका श्रीमती भने पारिवारिक दवाव, सामाजिक अपहेलनाका कारण गलत बाटो अपनाएका थुप्रै उदाहरण छन् । कतिपय महिला आफ्नै स्वार्थले परिवार र श्रीमान छोडेर छुट्टै बाटो लागेको पनि देखिएको छ ।
बिजय शाहीको ठ’गि धन्दा , फ’रमुला सिकाउछु भन्दै ४५ लाख ठ’गि गरेको खुलाशा